Shahaadada Maraakiibta - A Guide to Complete
Tilmaamaha Shahaadada ee Togaf
Tilmaamaha dhammeystiran ee Shahaadada Togafa
TOGAF waxay weli ku jirtaa Qaab dhismeedka Qaab dhismeedka Furan ee Kooxda. Waa qaab-dhismeed qaab-dhismeed ganacsi oo qaab-siinaya qaabka loola tacaalayo dejinta, qorsheynta, hirgelinta iyo maamulida qaab-dhismeedka teknoolojiyada macluumaadka shirkadda.
Yaa bixiya Shahaadada?
Waxay kuxirantahay Wasaaradda Gaashaandhigga Qaababka Farsamada ee Farsamada Macluusha (TAFIM) ee Wasaaradda Gaashaandhigga Maraykanka (TAFIM) waxaana soo saaray Kooxda Furan. Kooxda Furan waa shirkad warshado nadaafadeed iyo tiknoolajiyado naqshadeyn ah oo ay ka mid yihiin in ka badan shan boqol oo jaaliyadood oo waa qeybta koowaad ee tirtiridda baaritaanka.
Waa maxay barta TOGAF?
Mabda'a mabda'a shaqaalaha TOGAF waxay ku qanacsan yihiin in ay kor u qaadaan waxsoosaarka guud ee ganacsi iyada oo qaadaya waddo aan caadi ahayn oo wax looga qaban karo qorshaha. Asal ahaan, koorsada waxaa loogu talagalay tartan la eegayo in uu yahay mashiin ganacsi oo khibrad leh. A Shahaadada TOGAF waa shey aan la shaacin oo shamac ah
● In la hubiyo shuruudaha aasaasiga ah ee naqshadeynta naqshadeynta
● Awooda falanqayneed ayaa la sameeyay waxaana si habboon loogu xirmi karaa qaab dhismeedka mashruucyada.
Meeshee ururku wuu awoodaa TOGAF la hirgeliyaa?
Maaddaama TOGAF ay qaadato hab aan caadi aheyn oo lagu maareyn karo qorshaha, waxaa si joogta ah loogu soo bandhigaa heerarka 4 ee goobaha ganacsiga, si loo noqdo Ganacsi, Arjiga, Macluumaadka iyo Teknoolajiyada.
Dhismaha Ganacsiga - Tani waa wax tilmaamaya qaabsocodka ganacsiga, maamulka, ururada iyo hannaanka furaha ganacsiga ee ururka
Dhismaha Dhismaha - Taas oo shaxda shakhsi ahaaneed siinaysa shakhsiyaadka shakhsi ahaaneed ee loo soo diro, xiriirka ka dhexeeya qaabka codsiga iyo xiriirka ay la leedahay qaababka ganacsiga
Dhismaha Macluumaadka - Taas oo muujinaysa qaab-dhismeedka ururada macluumaadka sharciga ah iyo kuwa jireed iyo hantida maamulka.
Dhismaha farsamada - Qalabka, barnaamijka iyo nidaamka shabakad ee looga baahan yahay codsiyada mabda'a
Yaa uqalma inuu soo bandhigo Shahaadada TOGAF
Ma jiraan shuruudo u qalma helitaanka shahaadada TOGAF 9.1. Si kasta ha noqotee, codsaduhu wuxuu u baahan yahay inuu ka cadeeyo imtixaanka ururada ruqsada leh inuu si cad u dheehan karo macmiilka ganacsiga.
Waa maxay tirooyinka Heerarka Imtixaannada la tirtiro?
Rakibeyaashu waxay ka daaleen TOGAF 9.1 waxaa looga baahan yahay inay iska nadiifiyaan laba imtixaan, Heer 1 oo loogu talagalay koorsada TOGAF Foundation iyo Heerka 2 ee shahaadada TOGAF 9.1. Ujeedada qorshaynta ah in ay xoogga saaraan iyaga ayaa noqon doona mid aad loogu dhiirigelin karo in ay tirtiraan Hal Heer hal mar. Si kastaba ha noqotee, diyaarinta aasaaska ayaa hoosta ka xariiqay koorsooyinkooda sida tartameedku u fekeraan karo, iyo in la caddeeyo Heerarkaan hal mar. Waqtiga loogu talagalay wakhti-dhisiddu waa nidaam loogu talagalay maalmaha 4 iyo is-baaritaanku waa toddobaadyo XNUM
Maxay yihiin talooyinka loo baahan yahay si loo baadho imtixaanka?
Qaybta saxda ee saxda ah waa kala -
1. Heerka Koowaad ama Heerka Aasaaska - Xaddiga kaarka loo baahan yahay waa 55% taas oo ah 22 oo ka mid ah 40 ugu xooggan. Kuwani waa mid kasta oo ka mid ah weydiimaha kala duwan ee kala duwan oo leh baaritaan kasta oo keenaya shamadda keli ah.
2. Heerka Labaad ama heerka shahaadada - Xaddiga kaarka loo baahan yahay waa 60% taas oo ah 24 oo ka mid ah 40 ugu xooggan. Kuwani waa mid kasta oo ka mid ah weydiimaha kala duwan ee kala duwan oo leh baaritaan kasta oo keenaya shamadda keli ah.
3. Heerka Koowaad iyo Labaad ee TOGAF 9.1 - Imtixaanku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood. Qeybta koowaad waxay la mid tahay sida Heerka Labaad ee kor ku xusan iyo qaybta 2aad waxay la mid tahay sida Heerka Labaad ee kor ku xusan, hase yeeshee haddii ay dhacdo in bambo-baaris lagu sameeyo qeyb kasta oo uu ka mid yahay waa inuu dib u qaato goobta imtixaanka mar kale. Badeecada Tijaabada ah ee Aqoonsiga ee Aqoonsiga ayaa awood u siin kara tartanka in uu nadiifiyo labada Heer ee hal goor.
Heerka Labaad waa in la nadiifiyaa suurtagalnimada in la siiyo Shahaadada Togaf 9.1.
Dhexdhexaadinta u dhaxaysa laba hawlgal - Waa in uu jiraa hal dal oo bil ah inta u dhaxaysa dhaqdhaqaaqa. Tusaale ahaan, haddii codsaduhu soo gaabiyo imtixaan ku saabsan 25th Juun, 2017, muddada qabashada illaa 27th Juun, 2017 waa in lagu dhejiyaa. Imtixaan kasta oo horay loo maro oo aan la tixgelin doonin.
Halkee imtixaannadu ka dhacaan?
Imtixaannadu waxay dhacaan midkoodna Pearson VUE waxay diiradda saartaa waddanka, waana imtixaan furan, taas oo baaritaanka loo oggol yahay inuu doorto "tixraac" tabo ayadoo imtixaanka shaashadda ee kombiyuutarka lagu eegayo buuggan iyo waxyaabaha kale ee la socda. Kala bedelka labaad ayaa ah in la sameeyo imtixaan online ah. Inta badan muujinta diirada waxay ku dhiirigelineysaa imtixaannada internetka, waxayna hubaal ahaan xitaa kuugu diyaarin doonaan dhamaadka imtixaanka sanadka oo leh qoto dheer oo kala duwan sida muuqaal ka mid ah qaabka koorsadooda.
Maxay yihiin ujeedooyinka muhiimka ah ee a Koorsada Shahaadada TOGAF
Tan iyo markii ay Koorsada Shahaadada TOGAF ayaa loo tagay si loo hagaajiyo kala duwanaanshaha awoodaha dhismaha shirkadaha, qaabka koorsada si ballaaran u daboolaya:
Nidaamka Horumarinta Dhismaha marxalad kala duwan
Qaab-dhismeedka Maareynta Muuqaalka
Shirkadda Continuum iyo Tools
Dhismaha Muuqaalka, Maamul, Mabaadi'da iyo wixii la mid ah.
Halka koorsada, tartanku wuxuu:
Rakso u yeelo Wajiga horudhaca iyo marka lagu daro Tababarka Qorsheynta Socdaalka
Fahmaan Qorshaha Maareynta Muuqaalka, Metamodel oo ay weheliyaan Dawlad.
Hirgelinta qaababka caawimaadda dhismaha iyo fahamka xaaladaha ganacsiga,
Fahmaan ADM, maareynta daruuriga ah iyo isbedellada kala duwan ee ADM
Aqoonso Qaababka Habdhaqanka iyo Qaabdhismeedka Xirfadaha ee Dhismaha Ganacsiga
Waa maxay kharashka imika socda ee loo diyaarinayo shahaadada TOGAF 9.1?
Fasalka gudahiisa wuxuu tixgelinayaa koorasyada - Farsamada iyo Shahaadada Soodhaweynta waxay ku kici doonaan agagaarka INR 75,000. Marka laga soo tago kharashka, waa lagama maarmaan in la eego aasaaska diyaarinta iyo qaab-dhismeedka ka hor inta aan la dhameyn.
Maxay yihiin rajada mustaqbalka ee ka dambeeya dardargelinta shahaadeynta shahaadada TOGAF 9.1
Maadaama codsaduhu uu dhisi doono faham qoto-dheer oo ah qaab dhismeedka heerka ganacsiga, rajada mustaqbalka waxa ka mid ah:
Waxa loo shaqaaleeyaa qorshe ganacsi oo loogu talagalay MNCs, iyo waliba aduunka oo dhan. Maanta, hay'ad la'aan, furan ama mid gaar ah ayaa shaqeyn karta iyada oo aan la dhisin mashaariic ganacsi oo adag
Ka shaqee khabiir si aad u hesho sawir weyn oo loogu talagalay kala soocista, qorsheynta iyo hirgelinta qaabdhismeedka naqshadeynta ee gudaha shirkad
Shahaadada TOGAF 9.1 waa cabbir guud oo caalami ah oo awood u leh inay si waxtar leh ugu gudbiso qaybaha iyo waajibaadka ku saabsan kala soocidda, qiimeynta iyo hirgalinta qaabdhismeedka saxda ah ee shirkadda. Maanta, urur kasta, horumarinta iyo horumarka, wuxuu u baahan yahay macaamiil ganacsi leh awooda lagu fahmo, burburo kadibna ka dibna u sameeyo jawaabaha saxda ah ee lagu gaarayo hawlaha.